Taura nefekitori yepasi rose fekitori yeManitowoc uye mutaure nezveramangwana pamwechete!
Mangwanani aGunyana 3, VaLei Wang, Mutevedzeri Wemutungamiri weManitowoc Tower Machinery Bhizinesi Inosimukira Misika uye Mutungamiri weChina Dunhu, nebato rake vakakokwa kuti vashanyire Nyasha. Iwo mapato maviri aive neakadzika uye anofarira kuchinjana pane dzakaonda kugadzirwa mune yepamusoro manufacturi ...
Tekinoroji yekuvandudza, Mapurasitiki anogadzira ramangwana!
Pa3th Gunyana, 2020, mainjiniya VaPETER FRANZ vanobva kuGerman vakabatana zviri pamutemo naGrace Machinery. Ndiine makore makumi matatu nemasere ruzivo mupurasitiki extrusion tekinoroji R&D uye dhizaini manejimendi, Mr. Peter FRANZ akashanda muR & D uye mutengesi wekutengesa weDROSSBACH (Germany), semaneja mukuru weBatten ...
1600mm Pe Pipe Extrusion Mutsetse
Munguva pfupi yapfuura, iyo 1600mmPE pombi yekugadzira mutsetse yakabudirira kutanga kumusoro mufekitori yevatengi uye yakamhanya zvakatsiga. Mutengi akataura zvakanyanya nezve kugona uye hunyanzvi hweanogadza enjiniya aGrace! Kuburikidza nemakore mazhinji ezviitiko zvinoshanda, Nyasha akagadzira uye p ...
GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Lines inobvumidzwa zvinobudirira neHurumende Kambani yeZvivakwa Maindasitiri (SCCI) / Ministry of Industry Zvicherwa zveIraq.
Makorokoto! GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Mitsara inobvumidzwa zvinobudirira neHurumende Kambani yeZvivakwa Maindasitiri (SCCI) / Ministry of Industry Zvicherwa zveIraq! Ichi chirongwa chakakura che Ministry of Indasitiri yeIraq. Mr. Manhal Aziz Al Khabaz, Gurukota rebazi ...
1200mm Pe Pipe Extrusion Mutsetse
ne admin pane 19-10-16
Kumhiri kwemakasitoma mutengi akagadziridzwa 630-1200mm HDPE pombi extrusion yekugadzira mutsara yakave yakabudirira kugadzikana kumhanya muGRACE musangano! Extruder: inotora giravhiti mita dosing kudzora, yakakwira-inoshanda sikuru uye dhiramu, yakakwira-chaiyo inorema-inorema-mutoro Siemens giya bhokisi; Vacuum calibration tank: uchishandisa nylon ndiro, ...
315-800mm HDPE Pipe Extrusion Mutsetse
ne admin pane 18-12-21
Mushure meChinese chete Mutambo weChirimo, Nyasha yekugadzirisa chinjinjiniya timu yaive yaita zvizere mukugadzirisa. Munguva pfupi yapfuura, injini yekugadzirisa zvikanganiso VaWang Lei vakaenda kuIran kunogadzirisa kugadzirisa uye kugadzikana kumhanyisa iwo matatu marara OD800mm PE pombi yekugadzira mutsara. Customer highl ...
GRACE Signed Machine Kubatana Zvibvumirano neRadius Systems
Munguva pfupi yapfuura, Nyasha akasaina chibvumirano chekudyidzana neRadius Systems. Kubatana kwehunyanzvi kwakasvikwa nechinangwa chekuvandudza kubatana kwakadzika mundima yepurasitiki, nehunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji inoramba ichisimudzira kuvandudzwa kweindasitiri iyi. Semugadziri ...
Strategic Kubatana pamwe neOPW
ne admin pane 18-11-21
Mapato ese anotenderana kuzvipira mukudyidzana kwakadzika mupurasitiki extrusion munda, kunyanya mukubatana kuvandudzwa kweakakosha muchina. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti GRACE rave iro chete Chinese Chinese epurasitiki extrusion muchina mushandirapamwe mudiwa kune OPW bhizinesi repasirese. Tinofara kugoverana nemi kuti G ...
630mm PVC Pipe Yekuwedzera Mutsara MuEjipitori
ne admin pane 18-05-16
Muna Chivabvu, mainjiniya aGrace akauya kuRwizi rwakanaka rweNile kuzogadzirisa nekumhanyisa mitsara yekugadzira pombi mbiri 315-630mm. Iyo tambo yekugadzira ine counter-inotenderera yakapetwa mapatya-sikuru extruder, bhokisi remuchina, bhokisi rekusasa, tarakita, muchina wekucheka, uye muchina unobatidza moto; iyo unit ine yakavimbika s ...
Ministry Ministry yeIraq
ne admin pane 17-05-21
Ichi chirongwa chakakura che Ministry of Indasitiri yeIraq. Mr. Manhal Aziz Al Khabaz, Gurukota rebazi rezvemaindasitiri uye zvicherwa zveIraq, naAhmed Hussain, Director weSSCI vakapinda musangano wekuvhura weGrace Pipe Equipment. Dr. Hussein Muhammad Ali, gurukota rebudiriro reMi ...
Rutsva Rutsva, Mutsva Mufananidzo
ne admin pane 17-03-21
GRACE yakavakirwa paJiangsu China, uye inochengetedza nyika yose mukuona. Inotarisa pane epurasitiki extrusion uye yekushandura zvakare michina yekugadzira munda, GRACE chigadzirwa chemidziyo inosanganisa dhizaini, R&D, kugadzirwa, kutengesa uye sevhisi. GRACE NEW LOGO iri nekubwinya kusimudzira, kuvhura ne ...
Iyo midziyo inogamuchirwa zvinobudirira neTotal
ne admin pane 16-12-21
Munguva pfupi yapfuura, yakagadziridzwa TPE mbiri Extruder ye TOTAL kubva kuFrance inomhanya zvinobudirira. Munguva yekuyedza, vashandi vanoongorora vanogutsikana nemhando yemidziyo, panguva iyi, inorumbidza zvakanyanya kuita kwakakomba uye kwakakomba maitiro, basa repamusoro, kugona kwehunyanzvi o ...